Qonna - BBC News Afaan Oromoo
Miidhaan Noorman Boorlahog guddise namoota miiliyoonatti lakka'aman beelaarraa baraare.
Finfinnee daangessuu dhabuun hojii buqqaatota misoomaa gargaaruu danqe
''Qonnaan bultoota naannawa Finfinnee eenyummaan sabummaasaanii hamma baduutti gaheera'' jedhan Obbo Dachaasaa Beekaa
22 Caamsaa 2019
Qonnaan bulaa miilli maashinii seennaan of bararuuf ofirraa kutan
Qonnaan bulaa Kart Kaasar maashinii qonnaa keessatti miilli isaanii rakkate jennaan haaduu xiqqoon miila ofirraa kutun of baraaran.
16 Caamsaa 2019
Gaambellaatti piroojektoonni qonnaa 36 'eessa buuteen isaanii dhabame'
Koreen Paarlaamaa keessaa waa'een faayinaansii isa ilaallatu qorannoo gaggeesseen, Naannoo Gaambellaatti piroojektoonni qonnaa 36 baduusaanii mirkaneesseera jedheera. Eessa dhaqan laata?
Xaafiin kan eenyuti? Itoophiyaa moo Neezarlaand?
Dhaabbanni biyya Neezarlaand daldala xaafitiif heeyyama argachuuf motummaa waliin waliigaltee mallatteessee biyyattiin akka mirga abbummaa omishichaaf qabduu daanggeesseera. Kanaafuu dhimmichi mana murtii qaqqabeera.
Baangilaadesh keessatti ooyiruu galaanarra bololi'u tolchan
Qonnaan bultoonni Bangladesh kanneen yeroo baayyee balaa lolaatiin miidhaman ooyruu qonnaa galaanarra bololi'u hojjechuun rakkoo balaa lolaa dandamachaa jiru.
8 Amajjii 2019
Saatelaayitiin qonnaan bultoota Afriikaa weerarri ilbisootaarraa dhufuu akka malu akeekkachiise
Qorattoonni UK midhaan ardii Afriikaai lbisootaan akka hin mancaaneef dursanii akeekkachiisaa jiru.
Addee Taaboteen raammoo geerii oomisha boqqolloosaanii nyaatee isaan rakkisaa tureef furmaata argachuun, ofiif qofa osoo hin ta'in qonnaan bultoota biroofillee qoodaa jiru.
15 Hagayya 2018
Yaayyoo: "Lafa keenya qawweedhaan sodaachisanii nurraa fudhatan"
Qonnaan bultoonni lafti isaanii ijaarsa warshaa xaa'oo Yaayyoof jalaa fudhatame, beenyan gahaan waan hin kafalamiiniif deegaaf saaxilamne jedhu.
30 Adooleessa 2018
Gidiraa qonnaan bultoota aanaa Yaayyoo
Qorattuu qonnaan bulaan firoomte
Lammiin Itoophiyaafi qorattuu ilbisootaa dhaabbata idil-addunyaa biyya Keeniyaatti argamu tokkootti daarektara ta'uun hojachaa jirti. Mee turtii ishee waliin taasifne dubbifadhaa.
16 Guraandhala 2018
Abbaa qabeenyummaa irraa gara harka namaa ilaaluutti
Hongeen horsiisee bultoota Booranaa abbaa qabeenyummaarraa gara harka namaa ilaaluutti isaan geesseera.
13 Guraandhala 2018
Jireenya gogiinsaan miidhame: Qormaata Horsiise Bultoota Booranaa
Oromoon Godina Boranaa ummata balaa gogiinsaatiin gaaga'amni cimaan irra gahee keessaa tokko. Baayyeen hawaasa hosiisee bulaas sababa goginsaatiin loon isaanii dhabaniiru. Mee waan jiraattooonni BBC'tti himan dubbisaa!
Dubartummaa fi Qonna
Dubartii waggoota 20 oliif qotiyyoo camadattee qotaa turte, kanaanis maatii ishee bulchaa jirtu kanaan wal baraa.
Qonnaan bultoonni attamiin akka waldhabdee lafaa furatan
Afirikaa keessatti namoonni biliiyoona tokko ta'an maddi galiin ijoo isaanii qonnaaraatti hundaa'ee, garuu baayyeen isaanii abbaa qabeenyummaa lafaarratti waldhabu. Teknooloojii kana gargaaruu danda'aa?
Dhuufuun saawwanii qilleensa faaluuf ga'ee qaba
Qilleensi naannoo sababoota adda addaan ni faalama. Dhuufuun looniis miiteenii qilleensa faalu gadhiisuun %15 gumaacha taasisa
18 Onkololeessa 2017
Qonnaan bultoota Hindii: Humna ibsa sa'aatii 24 hin barbaannu
Humna elektikaa gar-malee gargaaramuun qabeenya bisahanii lafa jala fixaa jira jedhu
29 Fuulbaana 2017
Jijjiirama qilleensaa: Ho'i dachee dabaluun dhama bunaa jijjiiraa?
Jijjiiramni qilleensaa dhama buna guyyuu unattanii jijjiiruu bira taree gatiin bunaa illee akka dabalu gochuu danda'a
26 Fuulbaana 2017
Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afriikaa heddurraan balaa geessisaa jira
Hongee walitti fufiinsaan mudate irratti dabalamuun weerara raammoo geerii balaa guddaa qaqqabsiisuu danda'a jedhamee sodaatama.
22 Fuulbaana 2017